Rikoooo.com - Ọdụ ụgbọelu
Jikọtara: 29 Ọgọst 2019, 08:22
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by pip01 » 19 Sept 2019, 02:42
Oge ụfọdụ mgbe m kpọtụrụ ụlọ elu maka onye na-ahụ maka ala na-ekwu na ọdụ ụgbọ elu ugbu a IFR nweta agọnarị ihe nke a pụtara.
Jikọtara: 01 Mee 2016, 23:06
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Nitrical » 19 Sept 2019, 06:48
Ọ pụtara na enyeghị gị ohere ịbanye n'okpuru VFR. (Iwu Nlepụ Anya Anya) Achọpụtara m na ọ na-emekarị na ọnọdụ ihu igwe dị njọ (ọbụlagodi na nhazi m)
Mepụta ụgbọ elu, họrọ IFR. Nwere ike ime ya na ụgbọ elu, dị njikere naanị na ị họrọ "mba" mgbe a jụrụ gị na sim chọrọ ịtọ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-eso ntuziaka ATC ma ị nwere ike ị nweta ikike.
N'ụzọ bụ isi ị nwere nhọrọ 2 mgbe ịmalite ụgbọ elu. Enweghị ntụpọ ụgbọ elu a na-atụle VFR, na ndụ n'ezie ọ ga-apụta na ị ga-anọ n'okpuru otu ịdị elu (4500ft maka Belgium na ọtụtụ mba EU na ọsọ ọsọ n'okpuru 140kt IAS) Karịa enwere nkọwa ndị ọzọ ị kwesịrị ịtụle n'ihe banyere igwe ojii wdg. . FSX achọghị ịma banyere nke ahụ.
Iwu IFR (Instrument Flight Rules) n'ụzọ pụtara na ị ga-efegharị na ATC mgbe niile. Ọ bụrụ na ịgbaso ntuziaka ha, a ga-akagbu karịa IFR. Na FSX / P3D ọ bụ ntụpọ site na mbido ruo n'isi. N'ebe dị anya, ha ga-agwa gị ka ị gaa n'ihu na njem nke aka gị, mana ịbịaru nso ebe ị na-aga, ha ga-enye gị ntụzịaka ala. Echefula ịgbanye mpaghara ATC mgbe a jụrụ gị site na menu menu ATC n'oge ụgbọ elu ma ọ bụ IFR ga-akagbu ọzọ.
Amaghị m ma enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti FSX na P3D n'ihe banyere ATC. My RTX2070 kpebiri ịnwụ n’oge na-adịghị anya ka emelitere ya P3D, yabụ enwebeghị m ike ịhụ ihe dị iche n'etiti FSX na P3D